EyoMsintsi 1, 2018 admin
elandelayo enkulu uphuculo lwesoftwe Bitcoin ukuba ukufaka ulwimi olutsha isitshixo crypto
i jikelele, iqela labazinikeleyo umqambi emva ukuphunyezwa ithandwayo software, Bitcoin Core, kungekudala debuts 17 ukukhululwa yayo enkulu software, enye akubekileyo Code inani lotshintsho kakhulu-kulindelwe. Enye update entsha “ulwimi” ukongeza iinkcukacha kubalulekile izitshixo leyo evumela abasebenzisi ukuba igama akhawunti zazo ezahlukeneyo. Like yophawulo enye “iminikelo” kanti omnye “yokonga.” Ulwimi olutsha ijolise ukuze unike ilabhuli iqhosha ngalinye Bitcoin (kwinzaliso) nge “yokurekhoda” achaza oko siyivula, “ukutshintsha indlela esicinga ngayo izipaji,” Chaincode injineli John Newbery uthe.
Inxalenye Isayinwe Bitcoin kwiNtengiselwano (PSBT) yenye utshintsho kakhulu-Kucingelwa ngokweemeko umthetho oyilwayo. (PSBT yifomati entsha intengiselwano ezingasayinwanga ngokupheleleyo, kodwa ukuhambisela macala de ekugqibeleni yasasazwa.) Inzuzo apha ukufumana ukhuseleko isipaji hardware kunye lula semali software. wallet One hardware, coldcardwallet liphumeze indlela yokusayina intengiselwano sele. Olu tshintsho khowudi ivula a lot of iinketho, linokumthoba ukonyuswa Bitcoin izivumelwano smart kunye neempawu wabucala. “PSBT kwakhona kwenza izinto ezifana multisigs kunye CoinJoins lula ukwenza,” Bitcoin Core onegalelo Andrew Chow uthe. Usukelo nala ikhowudi iinguqu ezinkulu kukuba ekugqibeleni ukufumana ikhowudi ukuya kwindawo apho nabani na ofuna ukuba asebenzise iingenelo ezipheleleyo Bitcoin angenza njalo.
Ingxelo Daily Market Kraken for 31.08.2018
$100M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Next:Blockchain News 03.09.2018